Dr. Tint Swe's Writings: Anxiety Disorders စိုးရိမ်စိတ်ကဲလွန်ခြင်း
၁။ ဆရာခင်ဗျား ကျွန်တော် social anxity အကြောင်းသိချင်လို့ပါ။ အဓိကကတော့ ဘယ်လိုကုသနိုင်မလဲဆိုတာကိုပါ။
၂။ အသက် ၄၉ နှစ်ရှိ၊ အမျိုးသမီးတဦးကနေ စာမျက်နှာ ၂ ရွက်အပြည့် လက်ရေးနဲ့စာတစောင်နဲ့မေးပါတယ်။
စိုးရိမ်စိတ်ဆိုတာ သဘာဝဖြစ်တယ်။ အချိန်မရွေး၊ လူမရွေးမှာလာဖြစ်နေတယ်။ စိုးရိမ်စိတ်ကဲလွန်ခြင်းကတော့ ရောဂါဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ပုံမှန်ဘဝကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဘို့မှာ အခက်အခဲအတားအဆီးတခု ဖြစ်နေတော့တယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ စိတ်အခြေအနေတွေထဲမှာ ဒီရောဂါက ဆိုးတဲ့အထဲမှာပါတယ်။
1. Panic disorder ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်ခြင်း၊ ရုတ်တရက် ကြိုတင်မှုမရှိပဲ ကြောက်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ ထပ်ထပ်ဖြစ်မယ်။ ဇောချွေးတွေပြန်မယ်။ ရင်ပတ်နာမယ်။ ရင်တုန်မယ်။ ဆို့နေသလိုခံစားရမယ်။ နှလုံးရောဂါ အတက်ရသလိုမျိုး ဆင်ဆင်တူနေမယ်။ နှလုံးရောဂါ မဟုတ်ပါ။
2. Obsessive-compulsive disorder (OCD) စွဲလမ်းမှုအားကြီးခြင်း၊ ကြောက်စိတ်ကိုသာ အမြဲတွေးထင်နေမယ်။ ဒီအတွက် တခုခုအားကိုးရာရှာတာမျိုး လုပ်နေမယ်။ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ လက်ခဏခဏဆေးနေသူမျိုးလည်းအတူဘဲ။
ဆောက်တည်ရမရ၊ ကြောက်နေ၊ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်နေ။ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ၊ အထင်အမြင်ကိုသာ တန်းတန်းစွဲဖြစ်နေ။ ခံစားခဲ့ရဘူးတာကိုဘဲ ထပ်ထပ်တွေးထင်နေ၊ အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်နေ။ တခုခုကိုထပ်ထပ်လုပ်နေ၊ လက်ကိုခဏခဏ ဆေးနေ။ အိပ်မရ။ ခြေ-လက် အေးစက်နေ။ အသက်ရှူတိုတောင်း၊ ရင်တုန်၊ တည်ငြိမ်အောင်နေလို့မရ၊ အာခေါင်ခြောက်၊ ခြေ-လက်ထုံကျင်နေ၊ ပျို့၊ ကြွက်သားတွေ တင်းတောင့်နေ၊ ခေါင်းမူး။
ဘာလို့ဖြစ်သလည်းတိတိကျကျမသိပါ။ တခြားစိတ်အခြေအနေတွေလိုဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအားနည်းလို့ဖြစ်ရတာတော့ မဟုတ်ပါ။ စာရိတ္တချို့ယွင်းလို့လဲ မဟုတ်ပါ။ မိဘအုပ်ထိန်းမှုနည်းလို့လဲ မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းတရားတွေ ပေါင်းဆုံရာကနေဖြစ်တယ်။ စိတ်မှာဖြစ်တာပေမဲ့ ဦးနှောက်စီးကြောင်းချို့ယွင်းလို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ နာတာရှည် စိတ်ဖိစီးမှုကနေ ဦးနှောက်စီးကြောင်းကို သက်ရောက်နိုင်တယ်။ ဦးနှောက်တည်ဆောက်မှု ပြောင်းလို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ မိသားစုထဲတယောက်မကဖြစ်တတာလဲရှိတယ်။ စိတ်ထိခိုက်စရာ ကြီးကြီးမားမား ခံစားရတာကနေ ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်။
Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) = desvenlafaxine (Pristiq), fluoxetine (Prozac), imipramine (Tofranil), isocarboxazid (Marplan), meperidine, methadone, phenelzine (Nardil), propoxyphene (Darvon), selegiline transdermal system (EMSAM), sertraline (Zoloft), St. John's Wort, tramadol (Ultram), tranylcypromine (Parnate), venlafaxine (Effexor), Tricyclic antidepressants (TCAs) = amitriptyline (Elavil, Endep), amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Sinequan, Adapin), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor, Aventyl), protriptyline (Vivactil), trimipramine (Surmontil)
Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) = citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Paxil, Paxil CR, Pexeva), sertraline (Zoloft)
Serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) = duloxetine (Cymbalta), venlafaxine (Effexor), desvenlafaxine (Pristiq)
အမေရိကန်လူမျိုးအရွယ်ရောက်သူတွေ စုစုပေါင်း ၁၉ သန်းမှာဒီရောဂါရှိတယ်။ တချို့ဆိုရင် ကလေးဘဝကတည်းကနေ ခံစားနေရတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေ အကြောက်တရားကင်းဝေးကြပါစေ။